Remy Zay Yar.
ကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးတဲ့ အင်နီမေးရှင်း ကာတွန်းရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ratatouille ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားလေးကိုသယ်ရင်းတို့ သိကြမှာပါ။
အဲ့ဒီထဲက Remy ဆိုတဲ့ ကြွက်ကလေးက အကောင်းစားတွေမှ စားချင်တယ်။
ပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်ကြီးတခုမှာလည်း စားဖိုမှူး ဖြစ်ချင်တယ်။
ကြွက်လေးတကောင်အတွက်တော့ ဒါတွေဟာ အိပ်မက်ပေါ့ဗျာ။
အဲ့ဒီ့ ဇာတ်လိုက် Remy ဆိုတဲ့ကြွက်ကလေးကို ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျ။
တရုတ် အယူအဆနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော်ဟာ ကြွက်နှစ်မှာမွေးတာဗျ။
ရုပ်ရှင်ထဲကကြွက်ကလေးဟာ သူ့ မှာအိမ်မက်တွေရှိသလို၊
အဲ့ဒီလို ဘာမဟုတ်တဲ့ အူကြောင်ကြောင် အချက်လေးများကို အတင်းဆွဲထုပ်ပြီးသကာလ၊
မတောက်တစ်ခေါက် photoshop လေးကိုအသုံးချလိုက်တော့၊
ဟောဒီလို ကျွန်တော့်ရဲ့idea လေးထွက်လာတယ်ဗျ။
မရှိမဲရှိမဲ့ idea လေးကို မတောက်တစ်ခေါက် photoshop ပညာလေးနဲ့ 
အတင်းကို မရမကဖန်တီးထားပြီးဖြစ်လို့ ၊
သယ်ရင်းတို့ တွေလဲ မောင်ဇေယျာလှိုင်လေးနဲ့ သယ်ရင်းဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံး၊
သီးခံခွင့်လွှတ်ပြီး ဖတ်ပေးကြ၊ ကြည့်ပေးကြပါဗျာ ... လို့ ။
ကျွန်တော်နဲ့ စောစော အိပ်ပျော်ဆေးတော်ကြီး ။
ဒီလိုပါ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က ညဆိုစောစောမအိပ်တတ်တာ ဟိုးငယ်ငယ်လေးထဲကပေါ့ဗျာ။
လူအများအိပ်ပျော်လို့ တိတ်ဆိပ်မှုတွေကြီးစိုးလာလေ၊ ကျွန်တော့်အတွက်ကြိုက်လေ လန်းလာလေဖြစ်ပြီး၊
ဟိုလုပ် ဒီလုပ်နဲ့အနည်းဆုံး ညသန်းကောင်မကျော်မချင်း အိပ်ယာမဝင်တတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပါ။
ဘာတွေလုပ်လဲ မောင်ဇေယျာရေဆိုပြီး အမေးရှိလာရင်တော့ ...
စာဖတ်တယ်ဗျာ။ video ကြည့်တယ်။ pc game ကစားတယ်။
software တွေကို install လုပ်ပြီးဟိုဟိုဒီဒီကလိတယ်။
အဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာ အများတစ်ကာ အိပ်တဲ့အချိန်ရောက်မှ ဖလန်းဖလန်းထတတ်တဲ့ကျွန်တော့်ကို၊
ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖွားရှိစဉ်က ဒီလိုခေါ်တယ် ... " ဖုတ်ကောင် " တဲ့။
အခုရော ... ဒီလိုပါပဲ ဒီအကျင့်ကပျောက်ကိုမပျောက်သေးဘူးဗျ။
အလုပ်တွေဘယ်လောက်ပင်ပန်းလာပါစေ၊ ညဆိုရင်တော်တော်နဲ့ မအိပ်ပဲ၊
ပိုဆိုးလာတာက internet ဆိုတာကြီးကို အတိုင်းအဆမရှိလွယ်ကူစွာအသုံးပြုလို့ ရတဲ့၊
နေရာဒေသမှာရောက်နေလေတော့ကာ ... သယ်ရင်းတို့ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။
internet တစ်ခုထဲနဲ့ ပဲမိုးလင်းသွားလို့ ရတဲ့ အခြေအနေလေ ...။
မွေးသမိခင်ကျေးဇူးရှင်က ညည ဖလန်းဖလန်းထတတ်တဲ့ကျွန်တော့်ကို၊
စောစော အိပ်ယာဝင်ရမယ်ဆိုပြီး အမိန့် တော်မှတ်ပါလေရော။
မီးထဲက ခဲကိုကိုင်ခိုင်းလိုက်သလိုပဲ ကျွန်တော့်မှာတွန့် ဆုတ်တွန့် ဆုတ်နဲ့ ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးသမိခင်ရဲ့ သဘောထားလေးက၊
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုတော့ နဲနဲမှ မကြိုက်ဘူးဗျ။
အရက်သေစာ ဘီယာ စသည်တို့ ကိုသောက်သုံးခြင်းကိုတော့၊
စကားကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်၊ မွေးသမိခင်ရဲ့ အမိန့် တော်ကိုကျွန်တော်နဲနဲမှလိုက်နာလို့ မရဘူးဗျ။
ညာဏ်ကြီးရှင် ကျွန်တော်မောင်ဇေယျာ စောစောအိပ်ယာဝင်လို့ ရအောင်ဘာလုပ်တယ်ထင်သလဲ ?
ဒီလိုဗျ ... ကျွန်တော်ကနဲနဲပါးပါးသောက်မိလို့ မူးပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ ၊
ဟိုဟိုဒီဒီတွေ မလုပ်တတ်ပဲ တန်းပြီးအိပ်တော့တာပဲဗျ။
ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကျင့်၊ ဒီအကျင့်ကိုကျွန်တော်အသုံးချလိုက်တာပေါ့ဗျာ။
ည ၉ နာရီထိုးပြီးဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်စတင်ပြင်ဆင်တော့တာပဲ။
၉ နာရီ ကလဲ ထိုးပဲမထိုးနိုင်ဘူးကွာဆိုပြီး စိတ်ထဲကတောင်ထင်မိသေး ... ဟေးဟေး။
ကြည့်ချင်တဲ့ video တစ်ကားကို pc ထဲမှာအသင့်ပြင်၊
( ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့pc နဲ့ 
video အခွေတွေကိုကြည့်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။
ear phone လေးတတ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာ )
ကြည့်မဲ့ video အခွေကအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖြင့်၊
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖေါ်စပ်ထားတဲ့ စောစော အိပ်ပျော်ဆေးတော်ကြီး ကို စတင်အသက်သွင်းတော့တာပါပဲ။
ငါးကြင်းခွက်လို့ ကျွန်တော်တိုခေါ်ကြတဲ့ ခွက်ကိုယူ၊
( စည်ဘီယာထဲ့တဲ့ခွက်၊ ကြံရည်တို့ ဘာတို့ ထဲ့တဲ့ခွက်သိကြတယ်မလား )
ပျားရည်နဲ့ ရေသမသွားပြီဆိုတော့မှရေခဲတုံးလေး ၂တုံး ၃တုံးလောက်ထဲ့၊
ပြီးတော့ ကိုဂျော်နီ အမဲကောင်ကို လက်သုံးလုံးလောက်ထဲ့၊
ကိုဂျော်နီအမဲကောင် Collector's Edition လေးကိုမတန်မရာကိုင်တတ်ပါတယ်။
ပိုက်ပိုက်အသင့်အသင့်ပေါနေရင်ဖြင့် ရိုးရိုးကိုဂျော်နီအမဲကောင်ကို ကိုင်ပါတယ်၊
ပိုက်ပိုက်မပေါတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့် ကိုဂျော်နီ အနီကောင်ကိုကိုင်ပါတယ်၊
ပိုက်ပိုက်ကို ရှိရှိသမျှဘောင်းဘီအိပ်ထဲ ဟိုနိုက်ဒီနိုက် အသကုန်နိုက်နေရပြီဆိုရင်ဖြင့်၊
ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုချစ်ခြင်ယောင်ဆောင်ပြီး Grand Royal အမဲကိုကိုင်တတ်ပါတယ် )
ပြီးတော့ pc ရှေ့မှာနေရာယူ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘေးမှာကတော့ မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းအလား၊
တောင်ကြီးပဲကျော်လေးကတစ်ပွဲ၊ ကြက်ဥ ဟတ်ရိုက်လေးကတစ်ပွဲ၊
တစ်ခါတစ်လေ လမ်းထိပ်က ကာဆင်ဘိုင်ကြက်ရိုးသုတ်လေးကပါလိုက်သေး။
ဖေါ်စပ်ထားတဲ့ ဆေးတော်ကြီးကို စတင်ပြီးဂလုပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုဂလုတဲ့နေရာမှာ first cup လို့ ခေါ်တဲ့စစချင်း ဂလုကိုတော့၊
ခွက်ထဲက ဆေးတွေရဲ့ ၃ပုံ ၁ပုံလောက်ကိုတစ်ဂလုထဲနဲ့ ကုန်အောင်ဂလုပြစ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ မျက်စိက video ကိုကြည့်၊ ပတ်ပတ်လည်က ဆိုင်းဝိုင်းအလားထင်မှတ်မှားစေတဲ့
ကျန်ရှိသော လက်ကျန်ဆေးတော်ကြီး ၃ပုံ ၂ပုံကိုနဲနဲခြင်းဂလုနဲ့ ၊
video လဲပြီး အားလုံးလဲပြောင်၊ မောင်ဇေယျာလေးလဲ ည ၁၁ နာရီမကျော်ခင်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့ ရောက်၊
( အကြောင်းတစ်ခုခုမရှိပဲ ဒီလောက်ထိပြောစကားကိုနားထောင်လေ့မရှိဆိုတာကို
သူမွေးထားတဲ့သား၊ သူသိ၏။ )
ဒီလိုသင်ကာမကင်းဖြစ်လာတော့ တစ်ညကျွန်တော့်၏ အခန်းထဲကို ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုပြုပါတော့၏။
ဆေးတော်ကြီးမှီဝဲပြီး ဆိုင်းဝိုင်းတီးကာ ဇိမ်ယစ်လျှက် video ရှုစားတော်မူနေသောကျွန်တော့်ကိုမြင်လေသောအခါ၊
မောင်ဇေယျာလေး၏ မွေးသမိခင်ပီပီ ချက်ဆိုနားခွက်က မီးဟုန်းဟုန်းထတောက်၏။
ကျွန်တော့် အခန်းထဲဟိုဟိုဒီဒီ အကြည့်တွေပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့၊
ကျွန်တော်ဖေါ်စပ်ပြီး ပြစ်ထားသော ကိုဂျော်နီအမဲကောင်၊ ကိုဂျော်နီ အနီကောင်၊
Grand Royal အမဲကောင်တို့ အားဟိုတစ်လုံးဒီတစ်လုံး ထိုးထိုးထောင်ထောင်များကိုမြင်တွေ့ သွား၏။
မွေးသမိခင်ကျေးဇူးရှင်၏ စကားကို သားကောင်းသားမြတ်ကျွန်တော်
ဘယ်လို အချိုးနဲ့ နားထောင်နေတယ်ဆိုသည်ကို လက်တွေ့ ကျကျသိသွားသော
ကျေးဇူးရှင်မိခင်က ဖေါ်စပ်လက်စ လက်ကျန် ကိုဂျော်နီ အမဲကောင်အား၊
သူငယ်ချင်းကိုထိန်၏စကားကိုယူသုံးရလျှင် မွေးသမိခင်သည်ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်ကာ
ဗျတ်ဆောင်း၊ တယော၊ဗုံတို ဗုံရှည်၊
အင်္ဂလန်မှဘင်သံတို့ သာမက ပတ်မကြီးကိုပါအသကုန်တီး၏။
ဟီးဟီး ... ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်၏ မွေးရာပါသောက်ကျင့်၊
ဟော ... ယခု ကံကြမာကတစ်ပတ်လည်လာပြန်ပါပြီကော။
ချစ်သူပေါ့ဗျာ ... ချစ်သူ။
" ကိုရယ် ...။ ကိုအိပ်ယာဝင်တဲ့အချိန်ကအရမ်းနောက်ကျတာပဲဟယ်။
ည ၁၁ နာရီထက်နောက်မကျစေနဲ့ သိလား " ဆိုပြီး၊
ဟီးဟီး ... ဆေးတော်ကြီးပြန်လည်ဖေါ်စပ်မှီဝဲရန်
အချိန်အခါကျရောက်လာပြန်ပါပြီကော ... ချစ်သူ။
P.S. အရာရာကိုနားလည်မှုရှိတတ်သော ကျွန်တော့်၏ချစ်သူအား၊
ဒီ post ကိုရေးကာရန်စခြင်းဖြစ်ပါ၏။
Posted in စပ်မိစပ်၇ာ by Zay Yar Haling |3comments
Past & Presence ...
ကြိုးကိုင်သူနဲ့ ၊ ကြိုးအကိုင်ခံရသူလား ?
ပြုပြင်ထိန်းကျောင်းပေးသူနဲ့ ၊ ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုခံရသူလား ?
အနိုင်ကျင့်တင်စီးသူနဲ့ ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရသော power မရှိတော့တဲ့သူလား ?
...သို့ မဟုတ် တစ်ခရီးထဲအတူသွားနေကြတဲ့၊
ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီတွေလား ?
? ပေါင်းများစွာကို နေရင်းထိုင်ရင်း အတွေးနယ်ချဲ့ မိလိုက်လို့ ၊
ကျွန်တော့်ရဲ့ Nikon cap ကလေးရယ်ကို
ဒီနေ့( 14.Nov ) .....
သားကို ရှင်သန်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် .....
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖေဖေ နဲ့ မေမေ။
Posted in Happy Bday by Zay Yar Haling | 1 comments
ကြိုက်မိသော အပိုင်းလေးများ ... ၁
ကာရံမဲ့၊ မော်ဒန် အစရှိတဲ့ ယနေ့ ခောတ်ပေါ်ကဗျာလေးတွေကစပြီး၊
ဒါပေမဲ့ ရှိရှိသမျှအားလုံးကိုချစ်တယ်လိ့ တော့မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ချို့ ကိုတော့ တစ်ပိုဒ်စ နှစ်ပိုဒ်စလောက်ပဲချစ်တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အောင်ကျော်မိုးတဲ့
FaceBook ထဲမှာတော့ သူ့ ကိုယ်သူအောင်နေဦးတဲ့ဗျာ။ ( ဟဲဟဲ )
သူ့ ကပို့ ပေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတွေတစ်ချို့ ရှိတယ်။
အဲ့ဒီ့ထဲက ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တစ်ချို့ ကိုမျှဝေလိုက်တယ်ဗျာ။
တစ်ပိုဒ်စနှစ်ပိုဒ်စ ကျွန်တော့်ဟာကျွန်တော် ဆွဲယူလိုက်တာမျိုးလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
ကဗျာဆရာ မောင်မိုးမြင့် ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။
သွေးရိုး သားရိုး တောင်းတမှု့တွေပါ ။
တရား ဓမ္မပုံပြင်တွေ နားထောင်ချင်တယ်
ရေ ခဏခဏ ချိုးချင်တယ်
အကျီလှလှလေး သုံးထည်လောက် ၀ယ်ချင်တယ်
ရာဇ၀င် စာအုပ်တွေ ဖတ်မယ်
၀က်သား တုတ်ထိုးတွေ အများကြီးစားမယ်
ငါကတော့ မရှိလို့ တောင်းတတာက
ပိုက်ဆံ နည်းနည်းလောက်တော့ လိုချင်တယ် ။
Posted in Poem by Zay Yar Haling | 1 comments
စိတ်လေလွင့်ရာ ... ၃
စိတ်လေလွင့်ရာ ... ၃ အနေနဲ့ 
လွင့်ထွက်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်အလျှင်အပိုင်းအစလေးကတော့၊
အင်း ... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကနေအစပြုခဲ့တဲ့မုန်တိုင်း။
ရခိုင်ကိုတောင်အဖျားခတ်သွားလေရဲ့ ။ ဂီရိ မုန်တိုင်းဆိုလာဘာဆိုလား။
ငါသိသလောက်ကတော့ ရခိုင်နဲ့ ရန်ကုန်ဆိုတာ အဝေးကြီးပါကွာ။
ငါကပဲဥာဏ်မမှီတာလား ? ခောတ်နောက်မှာပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီလားတော့မသိပါဘူး။
" ရခိုင်မှာ အဖျားခတ်သွားသော ထိုဂီရိမုန်တိုင်းကြောင့်၊
ရန်ကုန်မြို့ ၏နေရာအတော်များများတွင် အင်တာနက်လိုင်းများပြတ်တောက် "
ဟဲဟဲ ... ငါ့ရဲ့ ဦးနှောက်လေးတစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ တောင်ထင်မြောက်ထင်လုပ်ခြင်သေးတယ်။
နိုင်ငံတစ်ကာနဲ့ ရန်ကုန်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အင်တာနက်ကေဘယ်ကြိုးတွေက၊
ကဲ ... ဒါကငါ့နဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးမကျဘူး။
လိုက်မမှီတာကို အတင်းရှောက်ပြီးတွေးမနေနဲ့ ။
ချစ်သူနဲ့ လဲမချက်ရ၊ မိသားစုနဲ့ လဲမချက်ရ၊
ရွစိရွစိဖြစ်လာရပြီပေါ့။ သိတယ်မလား ?
မောင်ဇေယျာလှိုင်လေ ...။ သံယောဇာဉ်ကြီးတတ်တယ်။
ကြံစမ်း .... ဘာလုပ်ရမတုန်း ?
ဟားဟား ... သိပြီ။ သိပြီ။
1818, Bonus, Dragon ဘာညာဘာညာ တွေကို
အတော်တုံးသေးတဲ့ငါပဲ။ ဒါနဲ့ များ ငါလူလည်ပါလို့ အော်ခြင်နေသေးတယ်။
( အမှန်က ၆မှတ်မရှိတာ၊ ဒါမျိုးနဲ့ လဲခံရပေါင်းများပြီ )
Phone Card တစ်ကဒ်ပြေးဝယ်၊ ၁၀ တန်တရွက်ခုန်ထွက်။
မျှော်လင့်ချက်တွေရင်မှာပိုက်ပြီး ဂဏန်း ၈ လုံးကိုစပြီးနှိပ်၊
ဘာသာစကားကိုရွေး၊ နောက်ထပ် ဂဏန်းတွေထပ်နှိပ်၊
You have 10 $ remaining for this card.
လာထား .... 959 ..... အမေ့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်နှိပ်။
You have 28 mins remaining for this call တဲ့။
စုပ်ခ ... စုပ်ခ ဖုန်းကဝင်မည်မဝင်မည်မသိရသေး၊
ပိုက်ပိုက်ကိုဖြတ်ဖို့ စကြံနေပြီ။ ရင်ခုန်ရပါလား ... ဟ။
တူ ...တူ ...တူ ....
ဟ ... ဟား။ ခေါ်နေပြီကွခေါ်နေပြီ။
ခဏလေးအားလိုက်တာနဲ့ စိတ်က ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ပြန်ရောဟ။
ဒါပေမဲ့ ယိုးဒယားကိုဆိုရင် ၁နာရီကျော်ရတယ်တဲ့။
ကုလားပြည်ကိုတော့ မိနစ် ၉၀ တဲ့။
ကြားဘူးသမျှ အာရှနိုင်ငံတွေ ဘယ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်
အားလုံး ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုခေါ် မိနစ် ၁၀၀ ဝန်းကျင်ရကြတယ်တဲ့။
မင်းတို့ တွေ မိနစ်တစ်ရာကျော်ပြောလို့ ရတဲ့ ကဒ်ကိုပဲ၊
ငါ .... မြန်မာပြည်သား မောင်ဇေယျာလှိုင်က၊
၂၈ မိနစ်ထဲပြောလို့ ရမှာကိုသိသိကြီးနဲ့ ၊
မြန်မာပြည်သားဟေ့ ... မြန်မာပြည်သား။
ဟော .... ပြောရင်ဆိုရင်ဝင်သွားပြီကွ။
ပြောလို့ ရပြီထင်ပါရဲ့ ။
ဟင် ... ဘာတုန်းဟ ? နင့်မေကလွား ...
လူကြီးမင်ခေါ်ဆိုသော GSM ဖုန်းမှာတတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါ
ကနီနား ..... ဘာတတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါလဲကွ။
ဘယ်တိုင်းပြည်မှာကိုမှ မပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ငါ့အမေကဝယ်ကိုင်ထားတာကွ။
ဘီဂိတ်တောင် GSM ဖုန်းတစ်လုံးကို ဒီလိုဈေးနဲ့ ဝယ်ကိုင်ဘူးမှာမဟုတ်ဘူး။
( ဟန်းဆက်ကိုမဆိုလို )
မရဘူး ... စိတ်ကြီးတယ်နော်။ ထပ်ခေါ်မယ်။
( အမှန်က ၆မှတ်ကိုမရှိတာ)
You have 23 mins remaining for this call.
အင် ... နင့်မေကလွား။ ဘာတုန်း။
ဒါလဲ ဖြတ်တာပဲလား။ ငါနော် .... ဟင်း။
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော GSM ဖုန်းမှာဆက်သွယ်မှုပြင်ပတွင်ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ...
You have 20 mins remaining for this call.
တူ ... တူ ....တူ ....။
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော GSM ဖုန်းမှာစက်ပိတ်ထားပါသဖြင့် ...
You have18 mins remaining for this call.
တူ ...တူ ...တူ ...
ဒီတစ်ခါ လူကြီးမင်းကြည့်စမ်း ...
( လူ့ စိတ်ကိုပြောပါတယ်။ ခက်တယ်နော် )
ဂျိဂလိဂျိ ... Hello ဂျိဂလိဂျိ ... ဘယ်သူတုန်း ? ဂျိဂလိဂျိ ...
အဟား .... ရပြီကွ၊ ဝင်သွားပြီကွ။
ဂျိဂလိဂျိ ... မေမေရေ ... ဂျိဂလိဂျိ ... သားပါဗျ။ ဂျိဂလိဂျိ ...
ဂျိဂလိဂျိ ... ဟဲ့၊ ဘယ်သူတုန်းလို့ဂျိဂလိဂျိ ... မေးနေတယ်လေ။ ဂျိဂလိဂျိ ...
ဂျိဂလိဂျိ ... မေမေရေ .... ဂျိဂလိဂျိ ... သားပါလို့ ဆိုနေဗျာ ... ဂျိဂလိဂျိ ...
ဂျိဂလိဂျိ ... ဘယ်ကဖုန်းသရဲ ... ဂျိဂလိဂျိ ... လဲဟ။ ဂျိဂလိဂျိ ... မေးနေတာလဲမဖြေဘူး ... ဂျိဂလိဂျိ ...
ဂျိဂလိဂျိ ... မေမေရေ ... ဂျိဂလိဂျိ ... အီးဟီးဟီး ( ငိုသံ ) ဂျိဂလိဂျိ ... သားပါဗျ။ ဂျိဂလိဂျိ ...
တူ ... တူ ... တူ ....
ဟ ...။နင့်မေကလွား၊ ကနီနား။
လူကြီးမင်းမနဲ့ ညားပြီ၊ ဂျိဂလိဂျိ ...လေးတွေမွေးလာတာပဲအဖတ်တင်တယ်။
မွေးသမိခင်ကတော့ သားအရင်းခေါ်တာကို ဖုန်းသရဲ ထင်သွားရှာပြီ။
( ၆မှတ်မှမရှိတာကို၊ ၆မှတ်မရှိတဲ့အသဲကွဲတာပဲကောင်း၏ )
ဒီလိုနဲ့ ပေါ့လေ ... မောင်ဇေယျာလှိုင်တစ်ယောက်၊
၆မှတ်မရှိလို့ ကွဲတဲ့အသဲကို၊ ရင်မှာပိုက်ပြီး၊
ရက်တွေ ... ရက်တွေကိုကြိုးစားကျော်ဖြတ်ရင်း၊
ချစ်သူနဲ့ တစ်ကွ၊ မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊
ကုသိုလ်ယူကြပါကုန်လော့ ..... ။
Posted in စပ်မိစပ်၇ာ by Zay Yar Haling | 1 comments
စိတ်လေလွင့်ရာ ... ၂။
သိတယ်မလား ဒီလိုပဲလေ ...
လူ့ စိတ်ဆိုတာကလဲ ခက်သားလား။
မအားလိုက်နဲ့ အားလိုက်တာနဲ့ခဏတာအတွင်းမှာ၊
ဟိုရောက်ဒီရောက်၊ ဟိုတွေးဒီတွေး ...
တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကလဲ ဆက်စပ်မှုရှိခြင်မှလဲရှိမယ်။
ဒီလိုဗျာ .... စိတ်လေလွင့်ရာ ... ၂ အနေနဲ့ 
လွင့်ထွက်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်အလျှင်အပိုင်းအစလေးတစ်ခုကတော့၊
အော် .... ငါ့နဲ့ နော် အသက်ကလဲကြီးပြီ။
၁၈ နှစ်ပြည့်ထဲက ကိုယ့်အသက်ကိုယ်အတင်းမေ့ထားလိုက်လို့ ၊
Forever Young ဆိုပြီးကြွေးကျော်နေနိုင်တာ။
ဒါလဲ ၆မှတ်က မရှိသေးဘူး။
ရရင်တော့ ၁၀၀ ပဲလိုခြင်တယ်ဆိုပြီး၊
၆ လိုက်ကန်းဆိုးမသိ လူတွေ ၆မြင်ကပ်အောင်အော်နေတုန်း။
အမှန်ကလေ .... ရခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေကနေ
သင်ခန်းစာတွေယူမယ်ဆိုရင်၊ အဘိဓါန်တောင်လုပ်လို့ ရနေပြီ။
အော် .... ဇေယျာလှိုင်၊ ဇေယျာလှိုင်၊
၆မှတ်ကို တစ်ကယ်မရှိတဲ့ အကောင်။
ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နေလဲ၊ ခုထိအသိတရားကမရခြင်သေးဘူး။
လူတွေလေကွာ ...။ လူတွေ။
မင်းနဲ့ မင်းကိုယ်တိုင်တောင်မှ တစ်ခါတစ်လေ၊
ခုဟာက မင်းနဲ့ သူများတွေလေကွာ။
နယူတန်ရဲ့law တွေက၊ ဒါမျိုးကျတော့၊
တိုက်ရိုက်အချိုးကျခြင်မှကျမှာပေါ့ ... ဟ။
မခံစားနဲ့ ။ လုံးလုံးမခံစားလိုက်နဲ့ ။
လူတိုင်းကို တရလွန် မျှော်လင့်ချက်ထားခဲ့တာကလဲ၊
မင်းသမိုင်းပဲ။ ဒီတော့ ...
လျှောက် ....။ မင်းလမ်းကိုမင်းရွေးချယ်ခဲ့တာ။
လျှောက်လိုက်စမ်း။ လျှောက် ..... ။
စိတ်လေလွင့်ရာ ... ၁။
နိုင်အောင်ထိန်းလို့ မရတဲ့ စိတ်သွားရာကို ခဏ ခဏပါခဲ့ဘူးတာပေါ့ဗျာ။
( မပြောခြင်လို့ စာနဲ့ ချရေးလိုက်တယ်ဗျာ )
အော် .... ငါ့နဲ့ နော် မိန်းမယူမယ်ကြံမှ၊
အင်း ... ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့မသိပါဘူး။
" အချစ်စစ်တို့ မည်သည်မှာပန်းခင်းလမ်းမဟုတ်ပါတကား " တဲ့။
နီးနေပြီ။ နီးတော့နီးနေပြီ။ ( ရွေးကောက်ပွဲကိုမဆိုလိုပါ )
စုစုပေါင်း ၃ နှစ်။ ၃ နှစ်စာဆိုတော့၊
အင်း ... တစ်လကို #@+?
၃၆ အမြှောက် #@+? ညီမျှခြင်း ????
နားမလည်မသိတတ်သူများက ထိုအမောင့်ကို စာအုပ်ကြီးအတိုင်း၁၀ ဖြင့်မြှောက်။
ရရှိသောပိုက်ပိုက်မှာ မောင်ဇေယျာ ရရှိထားသော ဝင်ငွေဖြစ်၏ ဟု
ပြီးတော့ ခောတ်မှီသောနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးနဲ့ အညီ၊
ပြောင်းခက -%#@ ၊ ဒါကိုလဲထဲ့ပေါင်း။
( သူတို့ သာသူတို့ ပြောင်းလဲ၊
ဆိုတော့ကာ စုစုပေါင်း ....
အား ... စုပ်ခပဲ။ မိန်းမယူဖို့ ဆုထားတဲ့၊
P.S. တစ်ခါထဲချရေးရင်ကျမ်းလေးမှာဆိုးလို့ ၊
Posted in စပ်မိစပ်၇ာ by Zay Yar Haling |2comments
Conceptual Art ဆိုတာဘာလဲ ?
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် meaning ဖွင့်ဆိုပုံလဲတူခြင်မှတူမယ်။
ဒီတော့ ... ဒီနေရာမှာ Conceptual Art ဆိုတဲ့ meaning ကို၊
just only my view.
ဒီလိုဗျာ .... Conceptual Art ဆိုတာ၊
မီဒီယာတွေအများကြီး ( တစ်ခုထက်ပိုသော ) ပေါင်းထားတာလဲဖြစ်ခြင်ဖြစ်မယ်။
မိမိဖန်တီးထားသော မီဒီယာနဲ့ အခြားသူတွေဖန်တီးထားတဲ့မီဒီယာကို
ပေးခြင်တဲ့ massage ကအတုံးအတစ်လိုက်လိုက်လဲဖြစ်ခြင်ဖြစ်မယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံး ပြီးသွားလို့ ထွက်လာတဲ့
result က Conceptual Art ပဲ။
နောက်ဆုံထွက်လာတဲ့ result ကိုဖန်တီးတဲ့ သူရဲ့ 
စိတ်ကူးနဲ့ အနုပညာ ...
အဲ့ဒါ Conceptual Art ပဲ။
Installations Art ဘက်လဲနဲနဲ နွယ်တဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်မျိုးပဲ။
Modern Art ကနေထိုးထွက်လာတဲ့၊
ပိုမိုပြီး ဆန်းသစ်လာတဲ့ အနုပညာတစ်မျိုးလဲဖြစ်တယ်။
ပိုပြီးသိတဲ့သူများရှိရင်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အယူအဆမှားနေရင်
ပြီးတော့ ... ကျွန်တော် အခုလုပ်လိုက်တာကလဲ
Conceptual Art စစ်စစ်ကြီးဖြစ်ခြင်မှဖြစ်မယ်။
နားလည်ပေးကြပါ .... လို့ ။
I Love U, Yume.
Conceptual Art Of Zay Yar Hlaing.
Posted in Art by Zay Yar Haling |2comments
Germany Night In Singapore
Argentina နဲ့Germany တို့ ရဲ့03. July. 2010 မှာကျင်းပခဲ့သော World Cup 2010 ပွဲလေးရဲ့ မှတ်တမ်းလေးပါ။
Singapore ရှိလမ်းဘေးဘီယာဆိုင်တစ်ခုရဲ့ အရှေ့မှာပါ။
Germany က Argentina ကို4:0နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့ Quarter-finals ပွဲလေးအပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်နိုင်သူ Greman မမ များကတော့ဒီလိုပျော်မြူးပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။
ကျရှုံးသူ Latin america သူအပြာရောင်စွပ်ကျယ်နဲ့ မမ ကတော့ဖြင့်၊
ဟောဒီလို တိတ်တိတ်လေးကြေကွဲပြီး၊ အသံတိတ်ငေးမောနေရုံမှတစ်ပါး
Bye Bye ပဲပြောလိုက်ပါရစေတော့ Coach Diego MARADONA ...
ချစ်သူလမ်းကြား ... ။
ပေါချောင်ကောင်း ... ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။
ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ meaning ပါ။
ပေါတယ်၊ ချောင်ချောင်လေးရနိုင်တယ် ဆိုတာသိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့၊
ကောင်း၏၊ မကောင်း၏ကတော့ စမ်းမကြည့်ဘူးလို့ မသိပါဘူး။
ဒီလမ်းကြားလေးဟာ Singapore နိုင်ငံ၊ Little India
အားလုံထဲမှာဈေးလဲကြီးပြီး၊ ရေပန်းအစားဆုံးနဲ့အကျော်ကြားဆုံး
လူသိအများဆုံးနေရာကတော့ Geylang ရပ်ကွက်ပါ။
အဲ့ဒီ့ Geylang မှာတော့ဖြင့် Special one တွေကျက်စားပါတယ်။
အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးခြင်သေးတဲ့ ဖိုးဖိုးများ၊
Special one များရှိရာ Geylang မှာဆိုရင်ဖြင့်၊
ဒီနေရာမှာကတော့ဒီလိုလေး အမှတ်အသားပြထားတာကိုမြင်တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
ကြိုက်သွားပါပြီ။ ဖိုးဖိုးရဲ့ ဖြေလှမ်းများက
စိတ်၏စေလိုရာသို့ ဦးတည်လို့ သွားရပါပြီ။
အမှန်က Personal အရ ဖိုးဖိုးရဲ့ ပုံကိုကျွန်တော်မတင်သင့်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ့နေရာမှာ ရှုရှုလုပ်ဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲပြီး၊
ဒီတော့ရခဲ့တဲ့ပုံလေးတစ်ချို့ ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မည်အောင်ဖေါ်ပြရတော့မှာမို့ 
Sorry ပါဖိုးဖိုး ခင်ဗျား ... ။
ဖိုးဖိုးရဲ့ မျက်နှာကိုတော့ တားတား Blur လုပ်ပြီးကာကွယ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။
သက်ရှိရောင်းကုန်မမ များကိုရှုဖို့ လဲကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။
ခိုးရှုတာကိုသူတို့ ရဲ့ အထိန်းတော်များကတွေ့ သွားခဲ့ရင်၊
ဒီတော့ ... ကျွန်တော်ကိုထူးထူးခြားခြား၊
အိမ်ထဲမှ အပြင်ကိုထွက်ခါ၊ မြူဆွယ်စကားလာပြောတဲ့မမ တစ်ယောက်ကို
အဲ့ဒီ့မမ ကိုရှုဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
မရပါဘူး။ ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာအခံနဲ့ ကျွန်တော်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ( ဟီးဟီး )
ဇစ်ကြီး ( ကိုဇစ် )ကတော့၊ ရူးခြင်ယောင်ဆောင်ပြီး၊
ရှေ့တည့်တည့်မှနေ ရှုဖို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ အားထုပ်ပါတယ်။
ကာကာ ( ကိုကာကာ ) ကတော့ခပ်လှန်းလှန်းမှနေပြီး၊
ready position နဲ့ အခွင့်သာရင်သူလဲဝင်ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ၊
ဒါကတော့ချစ်သူလမ်းကြားမှာစွန့် စွန့် စားစားနဲ့ ၊
တစ်ယောက်တစ်ဂျောင်ကပ်ပြီး ရှုရှု လုပ်နေကြသော
ဇစ်ကြီး နဲ့ ကာကာ။
( ကိုနိုက်၊ ကိုဇစ်၊ ကိုကာကာ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ လေးယောက်
ခံစားရတာကတစ်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ တွေအချင်းချင်း
မင်း ... ငါ ... ဟုသုံးစွဲကြပြီး၊
နိုက်ကြီး၊ ဇစ်ကြီး၊ ကာကာ၊ ဇေယျာ ဟုသာခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြပါတော့တယ် )
ကျွန်တော်ဟာ Special one များစုဝေးရာ Geylang ရပ်ကွက် 24 လမ်းမှာ၊
တစ်ချို့Special one များဟာနေ့ စဉ်တွေ့ မြင်နေကြဖြစ်ခဲ့လို့ 
ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် Free ရနိုင်တဲ့အဆင့်အထိကိုခင်မင်ခဲ့ပါတယ်။
Yangon မှာတုန်းကလဲ၊ ဘော်ဘော်တွေနဲ့Night Club တွေကိုသွားရင်း၊
Night Club တွေမှာကျင်လည်ကျက်စားတဲ့ သက်ရှိရောင်းကုန်မမ များနဲ့ ခင်မင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ ဘဝတွေကိုနဲနဲစပ်စုကြည့်ခြင်လို့ အဲ့ဒီလိုခင်အောင်နေခဲ့ရခြင်းပါ။
ထိုသက်ရှိရောင်းကုန်မမ များနဲ့ ဟဝှာပြုခြင်းကိုတော့ဖြင့်၊
ကျွန်တော်ဝါသနာမပါ ပါဘူး။ မှန်ရာကိုပြောရရင်၊
အဲ့ဒီလို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဝါသနာမပါခဲ့ပေမဲ့၊
Singapore အစိုးရရဲ့ ထိုအရာအပေါ်ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်မှုကိုတော့ဖြင့်၊
သိသင့်သိအပ်သော ဗဟုသုတများကိုလဲသင်ကြားဖြန့် ဝေပေးပါတယ်။
ထို့ အတွက်ကြောင့်၊ ကျန်မာရေးအတွက်လဲ ဘေးကင်းပြီး၊
မရှိတော့ဘူးမထင်ပါနဲ့ ၊ နေရာအနှံအပြားမှာမှောင်ခိုဈေးကွက်ကတော့ရှိနေမှာပါပဲ။
အစိုးရအနေဖြင့်၊ ကျန်းမာရေး၊ ရာဇဝတ်မှု အစရှိသည်များကို
ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ ... ။
ရောက်တတ်ရာရာ ၊ တိုတိုထွာထွာ ... ၄
ခရီးသွား ... ။
ဘီယာတစ်ဗူးနဲ့ ၊ ချစ်တဲ့သူ။
ဘီယာဗူးလေး နေဝင်ရရှာပေါ့ ...။
Macro ရှုမလို့ ပေါ့။
သူကပြေးကိုယ်ကလိုက်နဲ့...
လုပ်ခြင်ရာသာစိတ်ကြိုက်လုပ်ပေတော့ ... အသင်လူသား။
မင်းဟာလောကကြီးရဲ့...
ရောက်တတ်ရာရာ ၊ တိုတိုထွာထွာ ... ၃
Portrait Of Yume.
အဲ့ဒါ့ ... " ယုမီ "ကွာဆိုပြီးလဲပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
viewer များဘက်ကလဲ ဘယ်ကလာ
" ယုမီ "ရမှာလဲ၊
This is call creator, art work & viewer.
ကဲ ... ဘယ်သူတွေ၊ ဘာပြောကြမလဲ ?
Use Ur Illusion ...
Nikon D5000 + Adobe Lightroom + Photoshop = Use Ur Illusion ... By Zay Yar Hlaing.
လမ်းလျှောက် ကြသူများ ...
Real & Fake .
မင်းရယ်၊ ငါရယ် ... လောကကြီးရယ်။
မိုးရွာသောနေ့... ။
ရောက်တတ်ရာရာ ၊ တိုတိုထွာထွာ ... ၂
ငါ့ဟာငါလဲကောင်းကောင်းနှပ်နေလို့ မရပါလား ...။